न्यूजिल्याण्डसँग हारेपछि भारतीय कप्तान कोहलीले के भने ? Kasthamandap Daily
न्यूजिल्याण्डसँग हारेपछि भारतीय कप्तान कोहलीले के भने ?
भारतीय कप्तानले सुरुवाती ४०–४५ मिनेटदेखि नै खेलको ढाँचा परिवर्तन भएको बताएका छन् । उनका अनुसार न्यूजिल्याण्डको शानदार बलरका कारण टिम दबाबमा परेको र गल्ती गर्न बाध्य भए ।
यद्यपि, उनले भारतीय समूहले पूरा खेल अवधिभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको बताए । भारतीय कप्तानले खेलपछि पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘हामी हारेपछि निराश पक्कै छौं तर हाम्रो आत्मविश्वास अलिकति पनि खस्किएको छैन ।’